डडेल्धुरामा प्रधानमन्त्री देउवाले जित्छन् कि हार्छन् ? कस्तो छ माहोल । – Bihani Online
मतदाता अन्योलमा : पुरानैलाई रोज्ने कि क्रमभंग गर्ने ?
१९ कार्तिक २०७४ ११:२१ November 5, 2017 bihani
आखिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा डडेलधुरामा के कस्तो ‘रिस्क जोन’ मा छन् ?
अपराजित नेता : बहुदलीय व्यवस्था पुर्नस्थापनायता संसदीय निर्वाचनमा अपराजित रहँदै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसपटक पनि गृहजिल्ला डडेल्धुराबाटै चुनाव लड्दैछन् । उनी जिल्लाबाट अहिलेसम्म चुनाव हारेका छैनन् । ०४८ यताका सबै निर्वाचनमा देउवाले यहीँबाट चुनाव जित्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको राजनीतीक यात्रा
सभापति कर्ण मल्ल भन्छन्– ‘अब डडेल्धुरामा कांग्रेसका दुई गुट रहेनन्, त्यसकारण नतिजा हाम्रो पक्षमा आउनेछ ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ‘तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ’ काण्ड चर्चामा रह्यो । सप्तरीको भेडिया र मयनाकरेडी महुली खोलामा आएको बाढीको स्थलगत भ्रमणका लागि पुगेका पीडितलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्दा उनले अर्कै सामग्री वाचन गरे । संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक पत्रकार सम्मेलनमा झुक्किएर अंग्रेजी बिगारेको विषय पनि जिल्लामा चर्चामा छ ।
४. देउवाको व्यस्तता : शेरबहादुर देउवा देशका प्रधानमन्त्री हुन् । सँगसँगै उनी नेपाली कांग्रेसका सभापति पनि हुन् । प्रधानमन्त्री भएका कारण उनको व्यस्त दैनिकी हुने गरेको छ । उनीमाथि सारा देशको जिम्मेवारी छ ।
यिनै कारणहरुले देउवाले जिल्लामा समय दिन भ्याउँदैनन् र यो नै उनको हारको कारण नै बन्न सक्छ भन्ने विपक्षीहरुको तर्क छ । व्यस्त दैनिकीका कारण देउवाले मतदातालाई रिझाउन सकेनन् भने उनको भोट घट्न सक्छ । मनोनयन दर्ताकै बेला देउवा जिल्ला नआएको भन्दै एक कांग्रेस कार्यकर्ताले गुनासो गरे– ‘देउवा आफैं आएको भए राम्रो हुने थियो ।’
चुनाव आउन एम महिनामात्रै बाँकी रहँदा कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा यतिबेला चुनावी सरगर्मी बढेको छ । देउवाका अगाडि अरु पार्टीका उम्मेदवारहरु सधैं फिक्का हुने निर्वाचनमा यसपटक भने वामएकता भएको छ । त्यसैले यसपटक के होला ? कसले बाजी मार्ला ? त्यसको ठोस जवाफका लागि भने मंसिर २१ सम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ ।साभार : अनलाईनखबरबाट